Tsy mahataitra izay tsy manohintohina fitondrana… | NewsMada
Tsy mahataitra izay tsy manohintohina fitondrana…
Efa mby amin’ny tsy azo leferina sy tsy zaka intsony ny tsy fandriampahalemana amin’izao fotoana izao. Na an-drenivohitra io, na any ambanivohitra, na eny amin’ny lalam-pirenena. Amin’izany, tsy andro tsy alina ny asan-jiolahy, fanafihana…
Loza iray, loza roa… Efa tonga amin’ny fakana takalon’aina any ambanivohitra koa izao ny olon-dratsy fa tsy vitan’ny teratany mizaka ny zom-pirenena vahiny ihany. Zary fitadiavana ny raharaha? Mandoa vola hatrany izay te ho avotra sy velona.
Saika zary mandeha ho azy amin’izany ny fitsaram-bahoaka, rehefa mby amin’izay tsy zaka sy tsy andrin’ny olona eny ifotony ny zava-mitranga. Manginy fotsiny ny fandrobana tany noho ny afitsoky ny mahitahita amin’ny kolikoly ambadika.
Inona ny afitsoky ny mpitondra amin’izay tsy fandriampahalemana mampikaikaika ny vahoaka izay? Toy ny raharaha vitavita sy tsy hitahita ho azy rehetra amin’izao. Odian-tsy hita sy odian-tsy fantatra fotsiny izao. Nahoana loatra?
Tsy manohintohina ny mpitondra fanjakana tsinona, tsy manelingelina ny tombontsoany manokana, tsy mahamenatra azy… Avelany amin’izao na iza hiteny, na iza tsy faly. Ahoana marina, ohatra, ny amin’ny halatra taolam-paty? Tsy ahoana.
Hatramin’izay, matoa mikoropaka sy manao ho vaindohan-draharaha ny amin’ny tsy fandriampahalemana ny tomponandraiki-panjakana, misy tombontsoa voatohintohina ao? Na an’ny mpiray petsapetsa eto an-toerana io, na an’ny vahiny…
Tsy izay tsy firaharahan’ny mpitondra toy ny maso voatoto-tany izay ve ny mahatonga ny vahoaka ifotony midina an-dalambe? Tonga amin’ny fahatezeram-bahoaka na fitsaram-bahoaka aza ny raharaha… Mandra-pahoviana ny toy izao?
Na famelana ny vahiny hanjakazaka eto aza, tsy mampandry fahalemana… Miandry hanaovana fitsaram-bahoaka amin’ny fifidianana ny mpitondra? Tsy azo leferina sy tsy zaka intsony tsinona ny tsy fandriampahalemana amin’izao…